Isitudiyo sePolo Towers ku-strip #5
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Eddie
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Eddie izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Enhliziyweni i-Las Vegas Strip, ehlinzeka ngendlu yokulala yesitudiyo e-Polo Towers enombhede ka-Queen Murphy (obiyelwe ngodonga), kanye nekhishi.
I-Polo Tower inikeza izinsiza zesitayela se-resort kanye nokufinyelela kalula kumakhasino asezingeni lomhlaba, izindawo zokupaka, ukuyothenga, ezokuzijabulisa kanye nezindawo ezikhangayo.
I-boulevard eyodwa kuphela I-Strip enikeza isenzo esingami kanye nesasasa, futhi ungajabulela sonke isikhathi esingajwayelekile e-Polo Towers lapho kuhlangana khona ubuhle bakudala nokunethezeka okungajwayelekile.
Sicela uqaphele ukuthi le ndawo yokuhlala idinga okungenani ilungu elilodwa leqembu ngalinye libe ngaphezu kweminyaka engama-21 ubudala.
Imali Yokungcebeleka engu-$32.95 USD ngobusuku bunye studio (kanye nezintela ezisebenzayo) ekhokhwa endaweni yokungcebeleka. Le nkokhelo ihlanganisa i-wifi yegumbi, ukufinyelela kwegumbi lokujima, indawo yokupaka, ichibi elingaphezulu kophahla, ubhavu oshisayo, indawo yokugeza izingane, ikhofi yasendlini/umenzi wetiye, izingcingo zasendlini zasendlini nezamahhala, kanye ne-bbq.
Itholakala enhliziyweni ye-Las Vegas Strip, i-Polo Towers inikeza izitudiyo ezilala ezingu-2 ezinezinsiza zesitayela sokungcebeleka kanye nokufinyelela kalula kumakhasino asezingeni lomhlaba, izindawo zokungcebeleka, ukuthenga, ezokuzijabulisa nezinto ezihehayo.
I-oasis enhliziyweni ye-Las Vegas Valley, i-Polo Towers iyindawo ekahle yokubukwa kwendawo kanye nohambo lokuzidela. Ngemuva kwakho konke, iyiphi enye indawo yokuvakasha ekuvumela ukuthi uvakashele eParis, Venice, New York City naseRome esitobhini esisodwa sedolobha? Akuyona isiphithiphithi… yonke into kusukela kuKhesari kanye neForamu kuya emiseleni yaseVenice kungakapheli imizuzu embalwa yokumema kwakho e-Polo Towers.
Ihhotela elilula, eline-suite, elisezingeni eliphezulu eduze kwamakhasino, eduze kwakho konke okumele kubonwe!
Ukuhlala e-Polo Towers - i-Diamond Resorts International Destination kusho ukuthi ulahlekelwa ukugembula futhi uthole ukunethezeka kwekhaya khona kanye e-Strip. I-Monte Carlo, i-Planet Hollywood, kanye ne-Miracle Mile Shops zisekude ngemizuzu nje.
2 Izifunda Zokuzijabulisa
Itholakala eduze kwe-Polo Towers, Indawo Yemakethe yaseHawaii elungele umndeni iyikhaya lezitolo nezindawo zokudlela, kanye nesiteji esingaphandle esisingatha umculo obukhoma kanye nombukiso wangempela womlilo wasePolynesia. Ungakwazi futhi ukujabulela ukuyothenga kanye nezindawo zokudlela zabaklami e-City Center, ngaphesheya nje kwe-Strip.
Isevisi ye-concierge, i-Laundry coin iyasebenza
I-Polo Towers inikeza umoya onokuthula, okhululekile ngesevisi yasekamelweni nokulethwa kwegrosa esikhundleni sezindawo zokudlela. Izivakashi ezinezingane, noma ezifuna ukuhlala kude nezinkathazo, zithanda ukungabikho kwekhasino esendaweni. Kodwa usazojabulela i-spa, ukufinyelela ejimini, kanye nechibi eliphezu kophahla.
Amakamelo ezivakashi ane-Balconies noma i-patio
1 Umbhede weNdlovukazi uMurphy
I-ATM/Umshini wemali, indawo ye-BBQ/Ipikiniki, Izinto zokuhamba zamahhala, Igumbi legeyimu, Indawo yesipho/yezindaba, Indawo yokuwasha/Isevisi ye-Valet, Izinsiza zokubhucunga, Indawo yokupaka, indawo yokupaka i-Valet, ukuqashwa kweDVD/ividiyo.
4.73(46 okushiwo abanye)
4.73 · 46 okushiwo abanye
Indawo enhle yokufika emgqeni nasezindaweni ezikhangayo zaseLas Vegas